Madaxweynaha Jubbaland oo lakulmay wefdi uu hogaaminayo wasiirka dastuurka Soomaaliya | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Madaxweynaha Jubbaland oo lakulmay wefdi uu hogaaminayo wasiirka dastuurka Soomaaliya
Madaxweynaha Jubbaland oo lakulmay wefdi uu hogaaminayo wasiirka dastuurka Soomaaliya
Wasaaradda arrimaha Dastuurka Xukuumadda Soomaaliya ayaa dadaal xoogan ugu jirta sidii dib u eegis loogu sameyn lahaa dastuurka dalka, iyadoo lala tashanayo maamulada iyo qeybaha bulshada.
Wefdi ka socoda wasaaradda arrimaha dastuurka oo uu hogaaminayo wasiirka wasaaradaasi mudane C/raxmaan Xoosh Jibriil iyo mas”uuliyiin kale ayaa wada kulamo wadatashi ah oo ku saabsan sida loo wajihi karo dib u eegista dastuurka dalka.
Wariyaha warbaahinta Qaranka ee magaalada Kismaayo Aadan Max’ed Salaad ayaa ku soo waramayaa” in wefdigan ay lakulmeen madaxweynaha Jubbaland Axmed Max’ed Islaam Axmed Madoobe ayagoo kawad hadlay sidii maamulka Jubbaland uu bulshada ugu wacyigelin lahaa kaalinta ay ku leeyihiin in aragtidooda ay ka dhiibtaan.
Wefdiga aya sidoo kale waxaa lagu wadaa in ay la kulmaan xildhibaanada baarlamanka mamaulkaasi, si talooyin ku aadan habka ugu wanaagsan oo loo wajihi karo dib u eegista dastuurka, ayagoo intaasi kadib ay lakulmaan ururada bulshada.
Kulamadaan ayaa daba socda kulamo kale oo lagu qabtay qeybo kamid ah gobolada dalka Soomaaliya, waxaana la filayaa in ugu dambeyn la gaarsiyo bulshada Soomaaliyeed in fursad ay u helaan ka qeyb galka afti loo qaado dastuurka dalka oo dadalkiisa ay waddo Dowladda Soomaaliya.
Previous articleDowladda Soomaaliya oo dhiiragelinaysa waxbarashada dhalinyarada
Next articleWasaaradda Xanaanada Xoolaha oo ku guuleysatay qorshe Sacuudiga loogu dhoofinayo 1 Milyan iyo boqol neef oo ari ah